Cement akpa emepụta nyochaa otu arụmọrụ nke nkịtị e ji mara nke plastic kpara akpa
site ha na 21-01-29
Ciment akpa emepụta nyochaa kpọmkwem arụmọrụ nke nkịtị e ji mara nke plastic kpara akpa 1, ìhè arọ Plastics bụ n'ozuzu dịtụ ìhè, na njupụta nke plastic ikpa isi bụ banyere 0, 9-0, 98 g / cm3. A na-ejikarị eriri polypropylene eme ihe. Ọ bụrụ na ọ dịghị filler na kwukwara, ọ bụ hà t ...
Ikwu okwu banyere atumatu mmepe nke akpa ejiri kpara na obodo m
Abstract: Ekwenyere m na onye ọ bụla kwesịrị ịma nke ọma na akpa, nke bụ nnukwu akpa eji ebu ma chekwaa ihe. Taa, onye nchịkọta akụkọ nke boda plastic ga-ewebata gị aha nke ihe a nke bụ naanị otu okwu site na akpa ahụ, nke a na-akpọ FIBC. plas nke mba m ...
Olee otú ịgbatị ọrụ ndụ nke kpara akpa ngwaahịa
Maka akwa akpa a kpara akpa, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ndụ anyị, a na-ekekwa akpa ndị a kpara akpa n'ime ụdị dị iche iche, na mgbe ụfọdụ ọnụọgụ mbibi nke ngwaahịa akpa akpa bụ nke dị elu, kedụ ihe nke a metụtara Gịnị? Nke a bụ nkenke analysis site Hebei kpara akpa mmepụta mkpara: The Life of ...
Factorylọ ọrụ nke atọ enweelarịrị ndị ahịa siri ike, akpa valvụ
Si ịbịaru-ịkpa ákwà-mkpuchi-akpa na-eme ， Nzọụkwụ niile na-eji ngwa Starlinger, iji hụ na ogo dị elu nke akpa akpa
Ntinye nke 43rd na 50th AD Starlinger okirikiri looms ga-agwụ agwụ
Factorylọ ọrụ nke atọ anyị amalitela imepụta ele mmadụ anya n'ihu. Factorylọ ọrụ nke atọ dị ugbu a nwere 43 Starlinger okirikiri looms na-arụ ọrụ Taa, e nwere nkeji ọhụrụ 7, ha ga-arụnye otu otu.
Anyị were 360-degree VR mebere idaha égbè, nwere ike na-eche na immersive ahụmahụ anyị p kpara akpa factory
Anyị atọ factory e tinye n'ọrụ, ekpuchi ebe ndị 130mu. Nke a gbara ihe jikọrọ akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ mbụ, ikike mmepụta nke ụlọ ọrụ nke abụọ, yana ogo nke ụlọ ọrụ nke atọ. N'ihi mmetụta nke ọrịa ahụ, VR nwere ike ime ka ndị ahịa dị mma karịa visitin ...
Anyị mere 2020 New Year Party Na ogbako nke pp ad kpakpando ciment akpa
Nwunye nwunye anyị na-enye onyinye nrite ndị meriri egwuregwu Anyị na-achịkọta ndị ọrụ niile kwa afọ Site na ngalaba ụlọ oriri na ọ ,ụ restaurantụ, ngalaba ụlọ ọrụ, ngalaba mmepụta, ngalaba teknụzụ, ngalaba na-ahụ maka nlekọta dị mma, ngalaba obibi akwụkwọ na ngalaba ahịa, onye ọ bụla ga-abịa ụlọ ọrụ mmepụta ihe f ...
Diszọ mgbapụta abụọ maka akpa jumbo
Ngwaahịa nke akpa tan na-ejikarị arụ ọrụ buru ibu, anyị kwesịrị ị paya ntị na ụzọ ọpụpụ ya mgbe ị na-eji ya. Yabụ kedu ụzọ ụzọ agbapụ agbapụ abụọ dị? Hefa Editor gwara ndị na-esonụ: Usoro nke ibutu ihe kwa tọn akpa bụ iji rụọ ọrụ dịka ụdị ...
Ihe okike ohuru 50KG Cement bag for Africa Market
Nyere ọtụtụ ụlọ ọrụ simenti n'Africa aka ị nweta akpa simenti ọhụrụ Ọmarịcha mbipụta akwụkwọ na ogo dị mma ejirila olu ọma nweta otuto sitere n'aka ndị ahịa. Ọ bụrụ na akpa gị ga-ahaziri biko kpọtụrụ anyị
Polypropylene (eyi) kpara akpa mkpuchi Technology
1. Ntinye na Nkwupụta Nkwadebe: A na-ejikarị ihe pụrụ iche nke mkpuchi polypropylene eme ihe maka mkpuchi nke polypropylene kpara akpa na akwa akwa. Mgbe mkpuchi, akpa kpara mere nke mkpuchi nwere ike iji na-enweghị lining polyene akpa. ike na mkpokọta arụmọrụ nke w ...
Ego ole na-eri nke High Speed ​​okirikiri Double-kwadoro Printing Cement Bag Making Machine
A na-eji igwe a, nke jikọtara ya na igwe laminating ma ọ bụ na ọ bụghị, a na-eji eme ciment akpa na ụdị dị iche iche nke p kpara akpa. Ọ nwere ọrụ nke mbipụta akwụkwọ, gusseting, flat-cut, 7-type cutting, pneumatic-haịdrọlik akpaaka ihu mgbazi maka ihe nri na nwere ndị ndụmọdụ ...
Ọtụtụ mgbe Ẹbụp Ajụjụ metụtara p kpara akpa
1.What bụ ụdị zuru ezu nke akpa PP? Ajuju achoro na Google banyere akpa PP bu uzo ya. Akpa akpa bụ ndebiri nke akpa Polypropylene nke nwere ojiji dịka njirimara ya si dị. Dị na kpara na Non-kpara ụdị, akpa a nwere nnukwu iche iche ịhọrọ site na. 2. Kedu ihe ...
Bopp laminated akpa, Gbochie Bottom Valve Bag, P ciment Block Bottom valvụ Bag, Pp ndepụta Bag, Gbochie Bottom Valve Cement Packaging Bag, P kpara akpa, Ngwa niile